Global Voices teny Malagasy » ‘Chayn’, Vohikala Vaovao ho an’ireo Iharan’ny Herisetra An-tokatrano any Pakistana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Oktobra 2013 4:49 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika miora
Ho an'ireo vehivavy ao Pakistana, fandrahonana goavana ny herisetra an-tokatrano. Manombatombana ireo ONG any an-toerana fa manodidina ny 70 ka hatramin'ny 80 isanjaton'ny vehivavy ao Pakistana no iharan'ny herisetra am-bava, ara-pananahana, ara-pihetseham-po na koa ara-batana any an-tokatranony, araka ny Human Rights Watch (Fanaraha-maso ny Zon'olombelona) .
Tsy ampy ny ezaky ny governemanta hahatonga saina na hampiditra lalàna henjana kokoa . Eo amin'ny 5.000 ireo vehivavy  maty isan-taona noho ny herisetra any an-tokatrano, ary an'arivony ireo avotra saingy mitondra takaitra. Vitsy ireo azony hialofana, ary matetika dia tsy vahaolana azo andrandraina ny fampiharana ny lalàna.
Na izany aza, miezaka ny hanova ny zava-misy ny Chayn, vohikala tarihanà vondrom-bahoaka mpirotsaka an-tsitrapo,  amin'ny alalan'ny fanohanana ireo vehivavy iharan'ny herisetra an-tokatrano ao Pakistana. Mikendry ny hanaitra ny saina manoloana ny herisetra ara-pihetseham-po sy ara-batana ny Chayn , sy hanome fampahalalana momba ny fomba hiadiana amin'izany herisetra izany, ary hampahafantatra ireo vehivavy Pakistaney ny zony. Miasa tahaka ny rafitra fanohanana ao anaty aterineto ihany koa io vohikala io, izay ahafahan'ireo vehivavy mizara ny tantarany mikasika ny herisetra nihatra taminy sy ny dona naterak'izany.
Manome ny hevitra ambadik'izany ny mpanangana azy, Hera Hussain , manana maripahaizana amin'ny fandalinana ny toetsaina sy ny toekarena ary mpandraharaha ara-tsosialy, anatinà lahatsoratra iray:
Mifantoka indrindra amin'ireo vehivavy Pakistaney nobeazina io vohikala io ary manantena  i Hussain fa afaka hampiasa io vohikala io izy ireo sady hahazo ‘Chayn’ (izay midika fandriampahalemana sy fahatoniana amin'ny teny Urdu) amin'ny herisetra an-tokatrano mihatra aminy.
Tanatinà tafatafa niarahany tamin'ny The Diplomat , nanazava mikasika ny ekipa i Hussain:
Ampiasaina tahaka ny sehatra fitantarana ihany koa io vohikala io. Manamafy i Hera fa afaka hakan'ny hafa lesona hialàna anatin'ny fiarahana mifono herisetra misy azy ireo ny fizarana tantara sy zava-niainana avy amin'olona tsy nitonona anarana ao amin'ny efitry ny catharsis .
Mahamarika ny haingo mampiavaka io vohikala io ny mpitoraka bilaogy Saniya Mujahid :
Nidera io vohikala io ireo mpampiasa Twitter. Nitoraka bitsika i Tanya Dlima (@TanyaDlima1 ):
Nampirisika ny olon-drehetra hanaparitaka ny teny i Meera Ghani (@MeeraGhani ):
spread the word, it may help many who you may not even know are suffering abuse silently http://chayn.org  #ViolenceAgainstWomenIsWrong 
Naminavina hanao hetsika ivelan'y aterineto  ny Chayn atsy ho atsy. Ny tetikasan'i Hussain manaraka dia ny hanangana ny Chayn ao Inde sy Bangladesh, hamorona sehatra “pop-up” fialofana ary hametraka fiaraha-miasa amin'ny famatsiana.
Araho ao amin'ny Twitter (@chaynorg ) io tetikasa io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/10/28/53432/
 Human Rights Watch (Fanaraha-maso ny Zon'olombelona): http://www.hrw.org/news/2013/08/23/10-steps-improving-human-rights-pakistan
 hampiditra lalàna henjana kokoa: http://www.rawstory.com/rs/2012/02/20/pakistan-makes-domestic-violence-criminal-offence/
 5.000 ireo vehivavy: http://tribune.com.pk/story/529185/protecting-women-from-domestic-abuse/
 vohikala tarihanà vondrom-bahoaka mpirotsaka an-tsitrapo,: http://tribune.com.pk/story/599506/domestic-violence-within-the-four-walls/
 efitry ny catharsis: http://chayn.org/catharsis-room/
 http://chayn.org : http://t.co/OSTqrT37yy
 hanao hetsika ivelan'y aterineto: http://www.dellchallenge.org/projects/chayn-0